कस्तो स्वभावकी युवतीले पहिलो नजरमै प्रेम गर्छन् ? « Khabarhub
एजेन्सी– प्रेम सबैका लागि एकै किसिमको हुन्न । त्यसमा पनि प्रेम भाव कसरी, कहाँ, कुन अवस्थामा जाग्छ, त्यसको पनि पत्तो हुन्न ।
प्रेम प्रसंगको कुरा गर्ने हो भने केही युवतीहरु युवकको रुप देखेर नै प्रेम गर्न थाल्छन् । यो सबैमा लागू हुँदैमा किन भने कोही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम सम्बन्धका लागि हात बढाउँछन् ।
प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । यसमा पनि युवतीको नामको पहिलो अक्षरका आधारमा युवतीको स्वभाव कस्तो होला ? उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? नामको पहिलो अक्षरका आधारमा युवतीहरुको स्वभाव कस्तो होला ? जानी राखौँ ।